Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » IJamaica Ibona Ibango Elomeleleyo Kubahambi baseMelika
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ukuqhubeka nokubonisa ukwanda okuqhubekayo kokhenketho eJamaica, zombini I-American Airlines kunye ne-Southwest Airlines kunye ne-Expedia baqaphela ukwanda kwemfuno yendawo ekuyiwa kuyo ngabahambi kwiiveki neenyanga ezizayo.
I-uptick iye yaqatshelwa ziiAmerican Airlines kunye ne-Southwest Airlines kunye ne-Expedia.
Ukusukela ngo-Novemba, i-American Airlines izakusebenzisa i-Boeing 787-8 Dreamliner yomzimba omtsha.
I-Southwest Airlines yazisa ukuba ukusebenza kwabo ngenqwelomoya eMontego Bay (MBJ) kufutshane nekota kusondele kakhulu kumanqanaba eerekhodi zangaphambi kobhubhane.
“I-Amerika, uMzantsi-ntshona kunye ne-Expedia onke ngamaqabane abalulekileyo kwicandelo lezokhenketho laseJamaica, kwaye sijonge phambili ekwamkeleni iindwendwe ezininzi kungekudala,” utshilo uMphathiswa Wezokhenketho eJamaica, u-Hon. UEdmund Bartlett. “Ukuzithemba ukukhula kokhenketho lwaseJamaica kuhlala lomelele kwaye sizakugcina iJamaica yethu ekumgangatho wehlabathi ikhathalela iinkqubo zempilo nezokhuseleko, kubandakanya neePaseji zoQinisekiso, ukuqinisekisa ubusika obomeleleyo. ”
Ukuhlangabezana neemfuno eziphezulu ze JameyikhaIinqwelo-moya zaseMelika ziya kuphakamisa iinqwelo-moya ezisetyenziswa kwiinqwelomoya eziya eMontego Bay (MBJ) ezivela kwiindawo ezinkulu zedolophu yaseDallas / Fort Worth (DFW), eMiami (MIA) naseFiladelphia (PHL). Ukusukela ngo-Novemba, baya kusebenzisa i-Boeing 787-8 Dreamliner yabo entsha yokwenza le misebenzi. I-Boeing 787-8 Dreamliner yenye yeenqwelomoya ezintsha, inikezela ngamava endiza ngakumbi kunye nezinye izinto eziluncedo kubakhweli beklasi nakwezoqoqosho.
Iinqwelo-moya zaseMelika lelona lizwe liphetheke kakhulu eJamani. Isebenza ngenqwaba yeenqwelomoya ezingamiyo mihla le ukuya kwiindawo ezisuka kwiidolophu ezininzi zaseMelika kubandakanya iMiami (MIA), iNew York (JFK), iPhiladelphia (PHL), iChicago (ORD), iBoston (BOS), iDallas / Fort Worth (DFW, kunye I-airline nayo ibhengeze ukuba bazakuqhuba ngeenqwelo moya ezingapheliyo amaxesha ama-3 ngeveki ngeLanga / Mon / Thu ukusuka ePhiladelphia (PHL) ukuya eKingston (KIN) ukuqala ngo-Novemba 4.
Okwangoku, ii-Airlines zase Mzantsi-ntshona zixelele uMphathiswa uBartlett ukuba ukusebenza kwabo ngenqwelomoya eMontego Bay (MBJ) kufutshane kakhulu nekota yonyaka yangaphambi kobhubhane. Oku kukhula kwemfuno kuboniswe yiMelika kunye noMzantsi-ntshona kuxhaswa ngakumbi yi-Expedia, eneenkcukacha ezibonisa igumbi lobusuku kunye neemitha zokukhula kwabahambi ezidlula ixesha elinokuthelekiswa ngo-2019.
Olu hlaziyo lwanikezelwa ngexesha leentlanganiso kunye neenqwelomoya kunye ne-Expedia ezaziphakathi kuthotho lweentlanganiso ezazibanjwe neenkokheli zeshishini lokuhamba kwiimarike ezinkulu zaseJamaica zaseMelika nase Canada. Iintlanganiso zijolise ekuqhubeni ukwanda kokufika kwabakhenkethi kwixesha elikufutshane kunye nokuqinisa olunye utyalomali kwicandelo lokhenketho kwesi siqithi. Ukujoyina uMphathiswa uBartlett kwezi ntlanganiso wayenguSihlalo weBhodi yabaKhenkethi yaseJamaica, uJohn Lynch; UMlawuli wezoKhenketho, uDonovan White; IQhinga eliPhezulu kwiCandelo loMphathiswa Wezokhenketho, uDelano Seiveright kunye noSekela Mlawuli wezoKhenketho kumazwe aseMelika, uDonnie Dawson.
IJamaica ihlala ivulekile ukuhamba kwaye iyaqhubeka nokwamkela iindwendwe ngokukhuselekileyo. Iiprotokholi zayo zezempilo nezokhuseleko beziphakathi kwabokuqala ukufumana iBhunga leHlabathi lezoKhenketho nezoKhenketho (WTTC) Ukwamkelwa kohambo olukhuselekileyo olwavumela indawo ekuza kuvulwa kuyo ngokukhuselekileyo ukuhamba ngoJuni 2020. Esi siqithi sitshanje sibhengeze uphuhliso olutsha lokuhamba ngenqanawa kunye neepesenti ezingamashumi alithoba ezicwangcisiweyo Utyalomali lwabakhenkethi lushiye umkhondo.